Indonezia: Fandinihana Momba Ny Andron’ny Fanafahana Ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2013 3:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, Italiano, English
Mankalaza ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Raden Ajeng Kartini isaky ny 21 Aprily ny Indoneziana, fanta-daza amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy i Raden.
Teraka tanaty fianakaviana andriana manam-pahaizana i Kartini, lehiben'ny Fisoloan-toeran'ny mpanjaka ao Jepara ny rainy, izay asa natokana ho an'ny sarangan'olona ambony sy manam-pahaizana. Mpampianatra Islamika kosa ny raibeny avy amin'ny reniny. Amin'ny maha zanaka vavy ny lehiben'ny Fisoloan-toeran'ny mpanjaka azy, nahazo alalana hianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra Eoropeana tao India Holandey izy mandrapaha-tonga ny fotoana nanapahan'ny fianakaviana hevitra handefa azy hanambady.
Nandritra ny vanim-potoana nandraràna ny fampianarana ho an'ny ankamaroan'ireo vehivavy Javaney, nampiana-tena nianatra teny Holandey i Kartini ary nanoratra taratasy ho an'ireo namany Holandey izay nampahafantatra azy ny hevi-panandratana ny vehivavy.
Nitolona ho amin'ny fanatsarana ny zon'ny vehivavy Javaney i Kartini. Na dia izany aza, mbola tsy tontosa manontolo ny vinavinany hatramin'izao.
Nampiasaina ny tsongonteny (hashtag) #Kartini sy #Emansipasi tao amin'ny Twitter mba hiresahana momba ny dikan'ny andro (fankalazana) ho an'ireo Indoneziana marobe:
Miara-manamboatra sombinà batika (fandokoana) ho fankalazana ny Andron'i Kartini ireo vehivavy. Sary avy amin'i Robertus Pudyaanto, copyright @Demotix 4/20/2012
@e_christmas: Amiko, ny fanafahana dia midika fa manan-jo tsy hijaly ny vehivavy. Saingy tsy midika akory izany ho fanasaforana ny miralenta.
@dhana_ard: Misy ny fanafahana ankehitriny. Saingy rahoviana vao hanana ny firasainkinam-behivavy isika? Tratry ny Andron'i Kartini Ny Vehivavy Indoneziana!
‎‏‪@fajarwidd: Tsy hoe fitakiana ny fitovian-jòn'ny lahy sy ny vavy foana ny fanafahana. Mikasika kokoa ny fahaleovantenan'ny vehivavy izany.
Tao amin'ny Facebook:
Kazhiem Afif Shalihi: Araka ny filazan'i Mamah Dedeh (vehivavy Islamika malaza mpitoriteny an-kalamanjana) tamin'ny toriteniny tao amin'ny ANTV nandritra ny fankalazana ny Andron'i Kartini, nilaza izy fa “tsy tokony ho variana hitaky fitovian-jo ny vehivavy, fa mila mitodika amin'ny Korany fotsiny” Izany indrindra no antony mahatonga ireo vehivavy maro ao Indonezia nanaiky, sy resy lahatra amin'izany, rehefa amidy amin'ny anaran'ny fivavahana izy ireo. Namindin'ny mpampianatrany ireo mpianatra vehivavy Islamika ao Garut
Kaisar Victorio:Tahaka ny fetibe sy fampirantiana Kebay (akanjo nentim-paharazana) ny Andron'i Kartini. Tokony araraotin'ny Minisitry ny Raharaham-behivavy izao fotoana izao hitsidihana tanàna ambanivohitra mba hijerena izay tena mahazo sy mihatra amin'ireo vehivavy
Meydi Meidyawati: Maro amin'ireo “Kartinis” ankehitriny no disoina sy iharan'ny fanavakavahana… ataon'ny lehilahy na ny fanjakana/governemanta. Porofo iray hitako amin'izany ny ranomason'ireo zanaka vavin'i Indonezia izay andevozin'ireo firenena madinika tahaka an'i Hong Kong, Taiwan, Arabo, sns, saingy tsy manana fomba hafa na zavatra hafa atao ao amin'ny fireneny izy ireo. Tsy misy dikany ny fanafahana nitoloman'ny Ramatoantsika Kartini, lasa tantara fotsiny.
Abdul Khaliq Ahmad: olo-malazan'ny fanafahana ho an'ny firenena i Kartini, fa tsy olo-malazan'ny fanafahana ny vehivavy fotsiny
Nampiseho ny fomba fijery hafa ataon'ny mponina ny Andron'ny Fanafahana tao amin'ny firenena ny fihetseham-pon'ireo mpiserasera Indoneziana amin'ny ankapobeny.
@ayaslarass: Tsy hoe satria Andron'i Kartini, ka ho afaka miharihary araka ny sitrapontsika (isika) vehivavy, tsarovy, mpitarika ny finoantsika ny lehilahy
‎‏‪@pergijauh‬: Tratry ny Andron'i Kartini, andao tsy dia omena lanjany ny fomba fitafin'ny “Vavimatoan'ny Firenena”, dia tsy ho antsoina hoe (fanaka) malemy ianao
@ajuNna_njun: Fanafahana tsy hanadinoina ny toetrantsika tsara amin'ny maha-vehivavy
‎‏‪@IhsanMDe‬: Iray amin'ireo karazana fanafahana? “?@VIVAnews?: Filohan'ny Komitim-pifidianana: Maro ireo antoko politika tsy mahomby noho ireo vehivavy ?http://goo.gl/b7e6g?”
Bilaogera tsy fantatra anarana, fa fantatra amin'ny hoe m3d14ku's namoaka lahatsoratra momba ny maha-zava-dehibe ny Andron’ Kartini androany:
Maro ireo olona mitaraina fa manimba ny endriky ny fanafahana ny vehivavy maoderina.
[…]Toa adinontsika fa nisy ny tolona natao. Maro amintsika no mahafantatra ny fanafahana izay nitoloman'i R.A. Fantatra amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny asa fotsiny i Kartini, saingy maro amintsika no manadino fa anisan'ny mpanabe na maodely ho an'ny fianakaviana isika .
[…]Na dia eo aza izany, amin'ny maha andrin'ity taranaka ity antsika, tsy ampy ny fianjaikana Kebaya, satria ianao no mpanabe voalohany ny taranaka ankehitriny eto amin'ny firenena.